जग्गा प्रकरणमा म निर्दोष छुः गच्छदार « Bagmati Samachar
जग्गा प्रकरणमा म निर्दोष छुः गच्छदार
२४ माघ २०७६, शुक्रबार १५:११
२४ माघ । काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका उपभापति विजयकुमार गच्छदारले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफू निर्दोष रहेका बताएका छन् । बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोही प्रकरणमा गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदातलमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनले आफू निर्दोष रहेको दावी गरे ।
शुक्रबार बिहान १० बजे सिंहदरबारमा बसेको काँग्रेस संसदीय दलको बैठकपछि उनले भने, मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट त्यो बेला निर्णय भएको हो । मैले कुनै कानुन बदलेर बिपरित निर्णय गरेको होइन । जुन निर्णय संविधान र कानुन सम्मत भएको थियो । यसमा म दोषी हुनुपर्ने कारण छैन ।
उनले भने, तपाईँले देखिराख्नु भएको छ । पार्टीले राजनीतिक रुपमा एकखालको अडान लिएको छ । कानुनी प्रक्रियाबारे पनि कानुन विज्ञसँगै पार्टीले सुझाव लिइरहेको छ । पार्टीको नीति अनुसार म अघि बढिरहेको छु । पार्टीको अडान नै मेरो अडान हो ।
उनले भने, म यसबारेमा अहिले बोल्ने पक्षमा छैन । २७ गतेपछि थप के बोल्नुपरेमा बोलौँला । माघ २७ गते काँग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ । गच्छदारविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएपछि काँग्रेस सामाजिक सञ्जाल, सदन र सडकमा उत्रिएको छ ।
अख्तियारले गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको केही घण्टामै काँग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलदेखि पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मासम्मले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखेका थिए ।
बिहीबार बिहान १० बजे पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा पार्टीका शीर्ष नेता र कानुन व्यवसायीसँग काँग्रेसले परामर्श गरेको थियो । काँग्रेस नेताहरुलाई गच्छदारविरुद्धको मुद्दा फेस गर्न कानुन व्यवसायीहरुले सुझाव दिएका थिए । उनीहरुले अदालत जाने बाटो खुला रहेको भन्दै त्यसका लागि कसरी जाने भन्नेबारे संविधान र कानुनको थप अध्ययन गरेर सुझाव दिने समेत बताएका थिए ।
उक्त छलफलपछि काँग्रेसले बिहीबारको संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा बैठकसमेत अवरुद्ध गरेको थियो । त्यसपछि काँग्रेस नेताहरु आफ्ना भ्रातृ संगठनका पदाधिकारीसँग छलफलमा जुटे ।
साथै पार्टी प्रवक्ता शर्माले पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी गच्छदारको बुचाउ गरेका थिए । सो पत्रकार सम्मेलमा प्रवक्ता शर्माले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाल तथा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नविनलाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै कडा आक्रोश पोखेका थिए ।
सोही क्रममा पार्टी कार्यालयमै काँग्रेस नेताहरु यो प्रकरणमा कसरी राजनीतिक लडाइँ लड्ने भनेर योजनामा तल्लीन थिए । त्यसपछि सोही छलफलबाट भ्रातृ संगठनलाई सडकमा उत्रार्ने काँग्रेसले औपचारिक निर्णय लियो ।
सोही अनुसार नेपाल विद्यार्थी संघले शुक्रबार मध्यान्ह काठमाडौंको माइतीघरमा वृहत्त प्रदर्शन गरेको छ । नेविसंघको अगुवाइमा भएको प्रदर्शनमा तरुण दललगायतका भ्रातृ संगठनका नेता कार्यकर्ताको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो ।
विरोध प्रदर्शनमा सहभागीले बालुवाटार जग्गा प्रकरण आफ्नालाई जोगाउने, अरुलाई फसाउने, तिलकुमारीलाई जेल, विष्णु पौडेललाई माफी, क्याबिनेटको निर्णयमा मन्त्री जवाफदेही हुन्छ कि प्रधानमन्त्री ? सरकार तेरो भ्रष्टाचार किन मात्र गच्छदार ? जस्ता नारा लेखिएको प्लेकार्ड बोकेका थिए ।